China Rotary diaphragm valvụ emepụta na suppliers | Atụmatụ
A na-akpọ akụkụ a valvụ diaphragm rotary. A na-eji ya maka ụlọ ọrụ Chemical.
Kedu ọrụ valvụ diaphragm?
Diaphragm valve bụ ụzọ abụọ na-apụ apụ. Ha na-achịkwa mmiri mmiri site na ịhazigharị mpaghara nke ọkara na nke valvụ ahụ, na-agbanwe ọsọ na ọsọ nke valvụ ahụ nke ọma.
Produst Aha Ihe onwunwe Akụkụ Ngwa Nkedo ndidi Ibu ibu
China rotary diaphragm valvụ ụlọ ọrụ AISI 304 100 * 120 mm Industrylọ Ọrụ Chemical 0,01 mm 0,105 n'arọ
Gịnị bụ ọrụ nke valvụ actuator?
Valve actuator bụ imeghe ma mechie valvụ ahụ. Iji aka arụ ọrụ valves chọrọ ọnụnọ nke mmadụ ịgbanwe ha site na iji a kpọmkwem ma ọ bụ haziri njikọ ka azuokokoosisi. Nke mbụ, onye na-arụ ọrụ valvụ bụ valvụ njikwa.
Kedu ihe valvụ na-agbanwe agbanwe?
Gbanwee valvụ akara. Igwe na-achịkwa Rotary bụ valvụ a na-achịkwa nke na-emegharị anya site na ntụgharị ntụgharị. Site na nrụgide dị elu na arụmọrụ efu, a na-emepụta valvụ ahụ ma mepụta ya iji mezuo ihe ndị ị chọrọ maka nnukwu ọrụ na mmiri n'okpuru mmiri.
Kedu ụdị ihe eji eme diaphragm?
A na-eji diaphragm na-achịkwa valve, nke ihe eji akpọ "elastomer.". Na mgbakwunye na ịchịkwa diaphragms valvụ, a na-ejikwa elastomers oche oche valvụ na O-yiri mgbaaka nke valves na-achịkwa, ndị na-achịkwa, ndị na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ, na ọtụtụ ihe njikwa mmanụ na gas.
Nke gara aga: Nkenke mgbatị impeller mgbapụta
Osote: Helical Nha nha Gear maka Trailer Parts
Otu na akụkụ igwe eji arụ ọrụ CNC
Driller nke igwe egwu ejiri mee ihe na igwe
Mirror-egbu maramara igwe anaghị agba nchara iko mwekota